Biodiesel: kedu ihe ọ bụ, otu esi eme ya, ojiji, uru na ọghọm ya Mmeghari ohuru Green
Ike imeghari ohuru
Ike Igwe fotovoltaic
Kwes ike anyanwụ
Ọmụmụ ihe ọmụmụ
Agriculturelọ ọrụ ubi
Ihe omumu njem
Portillo nke German | 28/09/2021 12:45 | biodiesel
Iji zere iji mmanụ ọkụ nke na -abawanye okpomoku zuru ụwa ọnụ n'ihi ikuku anwuru ọkụ, a na -eme nyocha na mmepe nke ụdị ike ọzọ ndị ọzọ, dị ka ume ọhụrụ dị ka anyị maara ha. E nwere ọtụtụ ụdị ume ọhụrụ: anyanwụ, ifufe, geothermal, hydroelectric, biomass, wdg. Ike sitere na biofuels, dịka biodiesel, bụ isi mmalite ume ọhụrụ nke enwetara site na ihe ọkụkụ nwere ike dochie mmanụ ọkụ.
Enwere ike imepụta biodiesel ma ọ bụ acid acid methyl esters (FAME) site na mmanụ na abụba dị iche iche site na usoro esterification, gụnyere rapeseed na sunflower, soybean na walnuts n'otu aka, yana mmanụ na abụba ndị ọzọ na -eji. Usoro a na -amalite site n'iwepụta mmanụ site na osisi mmanu. Ị chọrọ ịmatakwu banyere biodiesel? N'ebe a anyị na -akọwara gị ihe niile.
1 Mkpa biofuels
2 Kedu ihe bụ biodiesel
3 Etu esi eme biodiesel
5 Isi uru
Kemgbe mgbanwe ụlọ ọrụ mmepụta ihe, mmadụ na -akwado ma na -akwalite sayensị na teknụzụ site n'ike sitere na mmanụ ọkụ. Ha bụ mmanụ, kol na gas. Agbanyeghị na arụmọrụ na ume ike ndị a dị elu, mmanụ ọkụ ndị a pere mpe ma na -agwụ n'ike n'ike. Tụkwasị na nke ahụ, iji mmanụ ndị a ga -emepụta ikuku ikuku na -esi na ikuku, wee si otú a na -ejigidekwu ikuku na ikuku ma na -ebute okpomoku zuru ụwa ọnụ na mgbanwe ihu igwe.
Maka ihe ndị a, ndị mmadụ na -anwa ịchọta ebe ọzọ ike ga -enyere aka belata nsogbu ndị metụtara iji mmanụ ọkụ. N'okwu a, a na -ahụta biofuels dị ka isi mmalite ume maka na ha sitere na biomass nke ihe ọkụkụ. Osisi biomass, n'adịghị ka mmanụ, anaghị ewe ọtụtụ nde afọ imepụtakama nke ahụ, ọ na-eme ya na njikwa mmadụ. A na -emepụtakwa ihe ndị na -emepụta ihe ọkụkụ site na ihe ọkụkụ ndị enwere ike imegharị ọzọ. N'etiti biofuels anyị nwere ethanol na biodiesel.
Kedu ihe bụ biodiesel
Biodiesel bụ ụdị biofuel ọzọ, nke emere site na mmanụ ihe oriri ọhụrụ na nke ejiri ya na ụfọdụ abụba anụmanụ. Ebe ọ bụ na ọtụtụ mmadụ na -amalite imepụta mmanụ nke ha n'ụlọ iji zere imefu nnukwu ego na mmanụ, biodiesel aghọọla onye ama ama wee gbasaa n'ụwa niile.
Enwere ike iji biodiesel n'ọtụtụ ụgbọ ala ndị na-agba mmanụ na-enweghị mgbanwe injin. Agbanyeghị, igwe dizel nke merela ochie nwere ike ịchọ nrụzigharị ụfọdụ iji hazie biodiesel ahụ. N'ime afọ ndị na -adịbeghị anya, obere ụlọ ọrụ biodiesel apụtawo na United States na ụfọdụ ụlọ ọrụ na -enye ọrụ na -enye biodiesel.
Etu esi eme biodiesel
Usoro a na -amalite site na mwepụta mmanụ sitere na osisi oleaginous. Mgbe a nụchara anụcha, a na -atụgharị mmanụ ahụ ka ọ bụrụ FAME ma ọ bụ biodiesel site na ịgbakwunye methanol na mkpali. N'ihi njirimara ya yiri mmanụ dizel, enwere ike iji biodiesel na injin mmanụ dizel dị elu. Na mgbakwunye, na mgbakwunye na uru ya dị ka mmanụ ụgbọ ala, enwere ike iji ya maka mmepụta okpomọkụ na ume. Eziokwu ahụ na mmanụ ọkụ a enweghị polycyclic aromatic hydrocarbons na -enye ohere ịchekwa ya na -ebuga ya n'enweghị ihe egwu doro anya. N'ihi na ọ na -esite na mmanụ ihe oriri na abụba anụmanụ, ọ bụ ihe na -emegharị emegharị na nke nwere ike imebi ume.
Biodiesel enwere ike gwakọta ya na mmanụ dizel n'ụdị dị iche iche na -enweghị mgbanwe nnukwu injin. Agbanyeghị, anaghị atụ aro ka ị jiri ngwakọta nke obere mmanụ dizel na -agbanweghị njirimara nke injin ahụ, n'ihi na enweghị ike ikwe nkwa ịrụ ọrụ ya dabere na nyocha emere ruo ugbu a.
N'aka nke ọzọ, biodiesel Ọ nwere ezigbo ihe na -eme mmanụ n'ihi na ọ bụ mmanụ oxygenYa mere, n'obere nha, ọ nwere ike melite arụmọrụ mmanụ dizel, karịa uru sọlfọ. Ọ dị ka ihe na -eme ka ndụ adịte aka. Usoro zuru oke maka inweta biodiesel bụ oru oma ma na ọnụọgụ na ike.
Tụnyere ọrụ a na -arụ na mmanụ dizel, otu n'ime ọghọm dị n'iji biodiesel bụ ike belatara. Ọdịnaya ume nke biodiesel dị ala. Na mkpokọta, otu lita mmanụ dizel nwere ume nke 9.300 kcal, ebe otu ego biodiesel nwere naanị kcal 8.600. N'ụzọ dị otu a, achọrọ biodiesel ọzọ iji nweta otu ike ahụ dị ka mmanụ dizel.
N'aka nke ọzọ, otu njirimara dị mkpa ịtụle bụ nọmba cetane, nke ga -akarịrịrị 40 iji rụọ ọrụ nke ọma. Nnukwu mmanụ cetane na -enye ohere ka injin ahụ malite ngwa ngwa na ngwa ngwa wee kpoo ọkụ na obere okpomọkụ na -enweghị ọgbaghara ọ bụla. Biodiesel nwere nọmba cetane yiri mmanụ dizel, yabụ enwere ike iji ya n'otu igwe na -enweghị nnukwu nsogbu.
Ihe ọzọ ị ga -atụle mgbe a na -ekwu maka mmanụ ọkụ bụ mmetụta ha na gburugburu ebe obibi yana mmetụta ndị nwere ike ibute ya nke enwere ike ibunye ya ọha mmadụ. N'okwu a, enwere ike ikwu na iji biodiesel dị ka onye nnọchi ma ọ bụ akụkụ nke ngwakọta mmanụ dizel-biodiesel Ọ nwere ike belata ikuku na -emetọ ikuku nke na -ebute ikuku, dị ka nitrogen oxides (NOx) ma ọ bụ carbon dioxide (CO2). Tebụl na -esote na -egosi pasent mbelata mmanụ dizel.
E jiri ya tụnyere mmanụ dizel nke sitere na fosil, Biodiesel nwere uru gburugburu ebe obibi n'ihi na ọ na -ebelata ikuku anwuru ọkụ.
E jiri ya tụnyere mmanụ dizel, ụgbụ carbon monoxide na -ebelata 78%.
Mgbe agbakwunyere biodiesel na mmanụ dizel ọdịnala, ọbụlagodi na ngwakọta na -erughị 1%, enwere ike ị nweta mmanu mmanụ mmanụ dizel nke ọma.
Ọ bụ mmanụ na -adịghị emerụ ahụ maka gburugburu ebe obibi.
Emere ya site na akụrụngwa ọhụrụ.
Ọ fọrọ nke nta ka ọ nweghị sọlfọ. Zere ikuku SOx (mmiri ozuzo acid ma ọ bụ mmetụta griin haus).
Meziwanye oku ma belata anwụrụ ọkụ na anwuru uzuzu (ihe ruru 55%, na -ewepụ anwụrụ ojii na isi na -adịghị mma).
Ọ na -emepụta obere carbon dioxide n'oge usoro ịgba ọkụ karịa ka carbon dioxide na -ewepụta site na uto osisi (okirikiri carbon dioxide mechiri emechi).
Onye mebiri ozi a nwere ike ịmatakwu ụdị biofuel a nwere njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ihe ọkụkụ » biodiesel » biodiesel
Zọpụta ụgwọ ụgwọ ọkụ eletrik gị
Chọrọ ịchekwa na ụgwọ ọkụ eletrik gị? Nweta ego ego € 30 site na iji koodu HOLA30.
Zọpụta na 100% ike ndụ akwụkwọ ndụ
Ihe si na mgbanwe ihu igwe pụta
Ike mmeghari ohuru na nke anaghi emeghari
Nabata ederede kachasị ọhụrụ banyere ume na ume ọhụrụ.